Uyibeka phi i-aquarium | Ngeentlanzi
Xa kuziwa ekubekeni i-aquarium, ngokuqinisekileyo siya kubuza siyibeka phi. Nangona i-aquarium ithathwa njengendawo yokuhombisa ngenxa yobuhle obubonelelwa ngaphakathi kuyo, ayifani nomzobo esiwubekayo kwaye sijonge amaxesha ngamaxesha. Kuya kufuneka sazi indawo efanelekileyo yeentlanzi, ezizizilwanyana eziphilayo, ukuze sibe nazo indawo efanelekileyo ukuze abemi bayo baphile bonwabile kwaye banempilo.
Xa isiza kuyinika indawo kufuneka siyithathele ingqalelo loo nto sukuyinika ilanga ngqoNgenxa yoku, kufuneka sikuphephe ukuyibeka ecaleni kweefestile, ke siyakuphepha ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo. Oku kuya kuthintela ukukhanya kwelanga okugqithisileyo Ukuqokelela i-algae eyenza ukuba ngaphakathi kwe-aquarium kungcolile. Kwaye ukongeza, amaqondo obushushu angaphakathi aya kunyusa ukuvelisa utshintsho olungenantsingiselo kwintlanzi.
Ifenitshala esibeka kuyo i-aquarium Kufuneka ixhase bonke ubunzima ngeelitha zamanzi kunye nayo yonke into eyihambisa ngaphakathi. Ungaze uyishiye phantsi okanye uyibeke kwifenitshala enokuba yingozi ekulobeni. Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba i-aquarium ifuna izinto ezahlukeneyo ezifuna amandla ombane. Ubuncinci kukho isifudumezi, isibane kunye nokucoca zonke kufuneka zifakwe kumbane wombane.
Eyona meko ibalaseleyo ye-aquarium njengesixhobo sokuhombisa inokuba yeyona nto onokonwabela ukuhlala kunye nokuphumla kuba i-aquariums yenye yezinto ezingaphezulu isetyenziswe kwi-feng-shui.
Eyona meko ilungileyo ye-aquarium kufuneka ihlale ikule ndawo yendlu esichitha kuyo ixesha elininzi. Ngokwesiqhelo, loo ndawo iya kuba ligumbi lokuhlala okanye igumbi lokuhlala. Into yokuhombisa enje ngoku ivelisa imvakalelo yokuphumla enceda ukwenza ikhaya lethu lihlale kamnandi ngakumbi kwaye lamkeleke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Uyibeka phi i-aquarium
Ukuveliswa kwakhona kweqela